Iindaba - iqondo eliphezulu lokushisa kwebhola
Ungazikhetha njani izinto zevalvu phantsi kobushushu obuphezulu
Kwinkqubo yokuhambisa ulwelo, ivelufa licandelo lolawulo oluyimfuneko, ikakhulu enemisebenzi yokulawula, ukuphambukisa, ukubuyela umva, ukusika kunye nokususa. Ivalve isetyenziswa kakhulu kumashishini nakwimimandla yoluntu. Ubushushu ivalve ephezulu luhlobo oluqhele ukusetyenziswa kwiivelufa. Iipropathi zayo ezithile zezi zilandelayo: ukusebenza kakuhle kokucima, ukucima okunzulu kunokwenziwa; weldability elungileyo; ukufakwa kakuhle kwefuthe, kunzima ukulonakalisa ngogonyamelo; Ubukrwada bobushushu buhlala bungaphantsi njalo njalo. Kukho iintlobo ezininzi zezivalo zobushushu obuphezulu. Eyona nto ixhaphakileyo bubushushu obuphezuluIvaluva zebhabhathane, ubushushu obuphezulu Izivalo zebhola, amacebo okucoca ubushushu obuphezulu, kunye nobushushu obuphezulu izivalo zamasango.
Izivalo ezinobushushu obuphezulu zibandakanya iqondo lobushushu eliphezulu lamasango, izivalo zokuvala ubushushu obuphezulu, iivalves zokujonga ubushushu obuphezulu, izivalo zebhola ezinobushushu obuphezulu, izivalo zebhabhathane ezinobushushu obuphezulu, izivalo zenaliti ezinobushushu obuphezulu, iivalve zokubaleka ezinobushushu obuphezulu, kunye uxinzelelo lobushushu ekunciphiseni izivalo. Phakathi kwazo, ezona zisetyenziswa ngokuxhaphakileyo ziivalvu zamasango, iigloves zeglobe, iivalves zokujonga, iivalves zebhola kunye nezivalo zebhabhathane
Iimeko zokusebenza zeqondo lobushushu eliphezulu ikakhulu zibandakanya ubushushu obuphantsi, ubushushu obuphezulu Ⅰ, ubushushu obuphezulu Ⅱ, ubushushu obuphezulu Ⅲ, ubushushu obuphezulu Ⅳ, kunye nobushushu obuphezulu Ⅴ, eziza kuqaliswa ngokwahlukeneyo apha ngezantsi.
1. Ubushushu obuphantsi
Iqondo lobushushu elingaphantsi kakhulu lithetha ukuba iqondo lobushushu lokusebenza kwevalvu likummandla wama-325 ～425 ℃. Ukuba iphakathi lingamanzi kunye nomphunga, iWCB, iWCC, A105, iWC6 kunye neWC9 zisetyenziswa ikakhulu. Ukuba eliphakathi liqukethe ioyile yesalfure, i-C5, i-CF8, i-CF3, i-CF8M, i-CF3M, njl., Ezinganyangekiyo nokubola kwesalfide, zisetyenziswa ikakhulu. Zisetyenziswa ikakhulu kwimozulu kunye noxinzelelo ekunciphiseni izixhobo nakwizinto ezilibazisayo zokupheka kwiindawo zokucoca. Ngeli xesha, izivalo ezenziwe nge-CF8, i-CF8M, i-CF3 kunye ne-CF3M azisetyenziselwa ukumelana nokubola kwezisombululo ze-asidi, kodwa zisetyenziselwa iimveliso ze-sulphur ezine-oyile kunye neoyile kunye nemibhobho yegesi. Kule meko, obona bushushu busebenzayo beCF8, CF8M, CF3 kunye neCF3M yi-450 ° C.
2. Ubushushu obuphezulu Ⅰ
Xa ubushushu bevalve busebenza ku-425 ～550 ℃, yiklasi enobushushu obuphezulu I (ekubhekiswa kuyo njengeklasi ye-PI). Izinto eziphambili ze-PI grade valve "ubushushu obuphakathi-kwinqanaba eliphakathi lekhabhoni ye-chromium nickel inqabileyo yomhlaba we-titanium esemgangathweni ophezulu wentsimbi enganyangekiyo nobushushu" kunye neCF8 njengoyilo olusisiseko kumgangatho we-ASTMA351. Ngenxa yokuba ibanga le-PI ligama elikhethekileyo, umxholo wentsimbi enobushushu obuphezulu (P) ifakiwe apha. Ke ngoko, ukuba indawo yokusebenza ngamanzi okanye umphunga, nangona ubushushu obuphezulu be-WC6 (t≤540 ℃) okanye i-WC9 (t≤570 ℃) inokusetyenziswa, ngelixa iimveliso zeoyile zesulphur zingasetyenziselwa ubushushu bentsimbi C5 (ZG1Cr5Mo), kodwa azinakubizwa ngokuba yi-PI-class apha.
3. Ubushushu obuphezulu II
Iqondo lobushushu yokusebenza ivalve ngu 550 ～650 ℃, kwaye ihlelwa njengeqondo lobushushu eliphezulu Ⅱ (ekubhekiswa kuyo njengo-P Ⅱ). I-valve yeklasi ephezulu ye-valve isetyenziswa kakhulu kwisixhobo sokuqhekeka esinamandla seoyile. Iqulethe iqondo lobushushu eliphezulu lining ukunxiba enganyangekiyo yesango ivelufa esetyenziswa kwindawo ejikelezayo kathathu ngemilomo eyi - nozinye iindawo. Izinto eziphambili zePⅡ grade valve "ubushushu obuphezulu" ibanga eliphakathi lekhabhoni chromium nickel inqabileyo emhlabeni titanium tantalum yomeleza intsimbi enganyangekiyo ngobushushu "ngeCF8 njengoyilo olusisiseko kumgangatho we-ASTMA351.
4. Ubushushu obuphezulu III
Iqondo lobushushu yokusebenza ivelufa 650 ～730 ℃, kwaye ihlelwa njengobushushu obuphezulu be-III (ebizwa ngokuba yi-PⅢ). I-PⅢ yodidi lwezivalo zobushushu obuphezulu zisetyenziswa ikakhulu kwiiyunithi ezinkulu zokuqhekeka kweoyile. Izinto eziphambili ze-PⅢ yeklasi yevalve ephezulu yokushisa yi-CF8M esekwe kwi-ASTMA351.
5.ubushushu obuphezulu Ⅳ
Iqondo lobushushu yokusebenza ivelufa yi 730 ～816 ℃, kwaye ikalwe njengobushushu obuphezulu IV (ebizwa ngokuba yi-PIV ngokufutshane). Umda ophezulu wobushushu obusebenzayo bevalve ye-PIV yi-816 ℃, kuba eyonaqondo lobushushu liphezulu libonelelwe ngumgangatho we-ASMEB16134 woxinzelelo lobushushu obukhethwe kuyilo lwevalve ngu-816 ℃ (1500υ). Ukongeza, emva kokuba ubushushu obusebenzayo budlula i-816 ° C, isinyithi sikufutshane nokungena kwingingqi yeqondo lobushushu. Ngeli xesha, isinyithi sikwindawo yeplastiki, kwaye isinyithi sineplastikhi elungileyo, kwaye kunzima ukumelana noxinzelelo oluphezulu lokusebenza kunye nefuthe lamandla kunye nokugcina kukungakhuli. Izinto eziphambili ze-P-valve yi-CF8M kumgangatho we-ASTMA351 njengobume obusisiseko "ubushushu obuphezulu, i-carbon chromium nickel i-molybdenum inqabileyo yomhlaba i-titanium tantalum eqiniswe yintsimbi enganyangekiyo yokushisa". I-CK-20 kunye ne-ASTMA182 esemgangathweni ye-F310 (kubandakanya umxholo we-C ≥01050%) kunye ne-F310H yentsimbi enganyangekiyo engenashushu.
6, ubushushu obuphezulu Ⅴ
Ubushushu obusebenzayo bevalve bungaphezulu kwe-816 ℃, ebizwa ngokuba yi-P, i-PⅤ iqondo lobushushu eliphezulu (iivalves ezivaliweyo, ezingalawuli iivelufa zebhabhathane) kufuneka zisebenzise iindlela ezizodwa zoyilo, ezinjengokufaka ubushushu be-lining okanye amanzi okanye igesi Qinisekisa ukusebenza kwesiqhelo kwevalve. Ke ngoko, umda ophezulu wobushushu obusebenzayo be-PⅤ yeklasi yevalvevu ephezulu ayichazwanga, kuba ubushushu obusebenzayo bevalve yolawulo abugqitywanga kuphela yimathiriyeli, kodwa ngeendlela ezizodwa zoyilo, kunye nomgaqo osisiseko wendlela yoyilo ikwayinto enye. PⅤ grade ubushushu ivelufa ungakhetha izinto ezinokukwazi ukuhlangabezana ivelufa ngokwendlela yokusebenza kunye noxinzelelo ukusebenza kunye neendlela ezizodwa uyilo. Kwiklasi ye-PⅤ ivelufa yeqondo lobushushu eliphezulu, ngesiqhelo i-flapper okanye ibhabhathane ivelufa yevalufa yeflip valve okanye ibhabhathane ivelufa ihlala ikhethwe kwi-HK-30 kunye ne-HK-40 i-alloys ezinobushushu obuphezulu kumgangatho we-ASTMA297. Umhlwa ukumelana, kodwa awukwazi ukumelana nomothuko kunye noxinzelelo oluphezulu.